🥇 ▷ Vivo V17 Pro: Waxaan kuu sheegeynaa warka duulimaadkaan ✅
Vivo V17 Pro: Waxaan kuu sheegeynaa warka duulimaadkaan
Vivo V17 Pro waa sharadka cusub ee suuqan loogu talagalay shirkaddan la aqoonsan yahay, sida caadiga ah waxaan la yaabnay soo jeedin aad u wanaagsan oo la xiriirta qeexitaankeeda iyo nashqadeyn soo jiidasho leh. In kasta oo ay run tahay, maalmo ka hor ayaan shaaca ka qaadnay faahfaahinta qaarkood ee la xiriirta qeybteeda sawirrada, halkaas oo ay noo oggolaatay inaan ka faa’iideysanno inay yeelaneyso kamarad laba laab ah, warar aad u wanaagsan oo loogu talagalay taageerayaasha astaanta.
Vivo V17 Pro oo leh shaashadda 6.44 “FHD”
Vivo v17 Pro waxay yeelan doontaa naqshad cusub oo cajiib ah oo suuqa ku dhufan doonta Sebtember 25-keeda.
Telefoonka casriga ah wuxuu soo saari doonaa a Ultra FullView, Super AMOLED 6.44 “FHD + 20: 9 shaashadda; Wixii aan uga mahadcelin karno waxay noqon doontaa naqshad aad u cajiib ah. Sida muuqata, shirkadda Shiinuhu waxay damacsan tahay inay suuqa u dirto moobiil tartan kula jira oo aan haysan doonin oo raaci doona rabitaanka akhristaha farta sawirkiisa shaashadda.
Sidoo kale, Vivo V17 Pro-ga cusub ayaa lahaan doona 128GB kaydinta gudaha Y 8GB oo RAM ah. Marka ku xigta, garoonkani wuxuu leeyahay a SoC Snapdragon 675 processor. Si aad u sii wadatid, astaamahaan gudaha ah waxay kuu oggolaanayaan inaad haysatid Funtouch OS 9.1 taageero; kaas oo ku saleysan Android Pie iyo sida ay noqon lahayd haddii kale lahaan lahaa Multi-turbo Y Qaabka ciyaarta. Hadda waxaan awoodnay inaan ogaanno in aaladdaani lahaan doonto a 4100 mAh batteriga iyo mid 18W si deg deg ah; Waa arrin runti wanaagsan oo waxqabadka wanaagsan inta lagu jiro maalinta.
Terminaal leh kamarad labalabeeya
Marka hore, aaladda Vivo V17 Pro ayaa lahaan doonta afar kamaradood gadaal ah xudunta u ah, kuyaal meel toosan, leh kamarad ugu weyn 48 megapixels (Sony IMX582); kan xiga 13 megapixels ahaanshaha tan muraayadaha telephoto leh 2x zoon; sii wadashada a 8 megapixel ultra xagal ballaaran iyo ugu dambeyntii kamarad ah 2 megapixels ee dareemayaasha qotada dheer. Waxaa muhiim ah in la xuso taas, moobiilkan ayaa si fudud ku heli doona sawirro leh durbaano macro leh masaafo ilaa 2.5cm Tanna waxay u sabab tahay tayada kamaraddeeda 8MP. Markaa, waxaan wajahaynaa moobiil horumar laga sameeyay dhinac kasta marka la barbar dhigo terminalka Vivo Z1x
Waxyaabaha ugu xiisaha badan ee taleefankan casriga ah ee Vivo V17 Pro ee la xiriira qaybta sawirkiisa, ayaa noqon doonta adiga laba kamarad soosaara, way yeelan doontaa 32 megapixels; ka dibna mid ka mid ah 8 megapixels oo leh astaamo leh xagal ballaadhan iyo 105 digrii oo ah aragti aragtida. Dareenkan waa la isku daray Toosh iyo makarafoon; iyada oo ujeedadu tahay in ay siiso isticmaaleyaasheeda tayo iyo muuqaal wanaagsan oo iskood ah.
Bilowgii naqshadda sheekada cusub ee Vivo V17 pro waxaa laga heli doonaa gudaha Hindiya wixii soo socda Sebtember 25-keedii. Waxaa sidoo kale lagu qiimeeyaa Rs 29,990, marka waxaa la qiyaasayaa in uu gaari doono qaaradda Yurub at € 380. Ugu dambeyntiina, Moobaylkaani wuxuu lahaan doonaa labo nooc oo kala duwan oo midabkiisa ah: Cirka buluugga ah Y Madoow madow